Global Voices teny Malagasy » “Lohahevitra mahatafiditra ny rehetra ny miralenta, fa tsy ho an’ny vehivavy ihany” · Global Voices teny Malagasy » Print
“Lohahevitra mahatafiditra ny rehetra ny miralenta, fa tsy ho an'ny vehivavy ihany”
Voadika ny 07 Jona 2018 5:28 GMT 1	 · Mpanoratra Johanna Lombeida Nandika Liva Andriamanantena
Mpikambana ao amin'ny ekipan'ny fandaharan'ny onjam-peo isan-kerinandro “La Movida Independiente ” ao amin'ny Wambra Radio  any Quito, Ekoadaoro i Johanna Lombeida. Manoratra ho an'ny Transistor Extremo  ihany koa izy. Dika an-tsoratra tamin'ny lahatsary momba ny fanadihadiana nataon'i Johanna momba ny zavon-teny manondro ny voambolana “género” (lahy/vavy natao hoe miralenta) ao anatin'ny tontolon'ny Ekoadaoreana ity manaraka ity.
Ireo teny mibahan-toerana avy amin'ny lahatsoratra miisa 3.326 izay navoaka teo anelanelan'ny volana Janoary 2017 sy Aprily 2018 milaza ny hoe “género” (miralenta) ao anatin'ny angona Media Cloud amin'ny seha-pampitam-baovao 2 amin'ny teny Espaniola ao Ekoadaoro. (jereo ny sary lehibe kokoa )
Ahoana ny zavon-teny nahasarika anao indrindra?
Nifidy ny zavon-teny hoe “miralenta” aho. Gaga aho raha nahita fa ny hamantarantsika ny miralenta dia avy amin'ny resaka izay mifototra amin'ny vehivavy irery ihany. Ny zavatra hafa nahasarika ny saiko dia ny voambolana “fifandraisana”. Afaka nampitaha ny teny hoe “miralenta” sy ny hoe “ideolojia” aho, ary tsy nisy ny fanononana mpandray anjara politika. Gaga ihany koa aho raha nahita fa voalaza fa in-efatra na in-dimy ny teny hoe “fandripahana”. Gaga aho nahita fa navantana tamin'ny vehivavy irery ihany ny zava-drehetra, toy ny hoe ny vehivavy ihany no liana amin'ilay lohahevitra miralenta. Ny fahitana ny teny hoe “fiombonana” no zava-dehibe iray hafa rehefa manakaiky kokoa ny faran'ny (zavon-teny), izay mifandraika amin'ny vehivavy ihany koa. Heveriko fa mahaliana antsika rehetra ny olana momba ny miralenta, noho izany dia gaga aho nahita fa mifantoka manodidina ny vehivavy ihany ny resaka.
Ahoana ny fomba hanehoana ny “miralenta” ao amin'ny fampitam-baovao?
Tiako ny mahita mpiantsehatra izay tsy voatery ho anatin'ny fifandaminana fa mpiantsehatra vaovao. Tiako ny mahita resaka hafa avy amin'ny lafiny hafa, avy amin'ny [fomba fijerin'ny] lehilahy.
Inona avy ireo teny tokony hananan'ny zavon-teny hoe ‘miralenta'?
Heveriko fa lohahevitra izay mahakasika antsika rehetra ny miralenta, fa tsy ho an'ny vehivavy ihany, fa mbola tohizantsika ihany ilay resaka fa ny vehivavy ihany no voakasiky ny miralenta. Taorian'ny (fanolorana) ny ideolojia. Mino aho fa hiresaka fotsiny momba izany ho toy ny zavatra noresahan'ny olona iray ny fampahalalam-baovao, misy mihitsy aza ny fanononana ny ideolojia mifandraika amin'ny (Filoha teo aloha) Correa sy (ny filoha ankehitriny) Moreno, toy ny hoe avy amin'izy ireo ilay ideolojia. Adinontsika ny tantara sy ny loharanom-baovao.
Ao anatin'ny andiany Rising Frames izay narafitra tao anaty fiaraha-miasa akaiky tamin'ny fikambanana El Churo  any Quito, Ekoadaoro ny lahatsoratra. Nikarakara atrikasa ry zareo tamin'ny 21 aprily 2018 ary namory solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinihany ny fomba hanehoan-dry zareo azy ireo na ny olana izay atrehany ao amin'ny angona media Ekoadaoreana sy ny famoronana tantara ho setrin'izany.
Nanampy tamin'ny dika an-tsoratra sy ny fandikan-teny ny lahatsoratra izay nasiana fanitsiana mba hazava sy ho fohy kokoa i Belén Febres-Cordero.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/07/120782/
 jereo ny sary lehibe kokoa: https://rising.globalvoices.org/files/2018/06/generonube.png